Linjani ilizwe lomoya ngokwebhayibhile ▷ ➡️
Injani i el mundo yemimoya. IBhayibhile ibonisa ukuba ihlabathi lemimoya liyinxalenye yokwenene yehlabathi lethu. Izinto ezenzeka kwilizwe lemimoya ziyabuchaphazela ubomi bethu kuba sonke sinomoya. Ihlabathi lomoya linqanaba lesenzo seengelosi kunye needemon.
Umhlaba wethu uneendawo ezintathu eziphambili: ihlabathi lenyama, ihlabathi lengqondo, nehlabathi lomoya. Nokuba siyayazi okanye asazi, sonke sithatha inxaxheba kule miba mithathu yehlabathi kuba sinomzimba, umphefumlo nomoya.
1 Linjani ilizwe lemimoya: uThixo nomntu
2 Ezinye izinto zelizwe lomoya
3 Ihlabathi lemimoya libuchaphazela njani ubomi bethu?
Linjani ilizwe lemimoya: uThixo nomntu
Linjani ilizwe lemimoya kwaye zeziphi izinto ezikulo?
IBhayibhile ithi uThixo ungumoya Unqulo lwenene lumele luphume kuMoya.
UThixo unguMoya; abo ke bamnqulayo bamelwe kukumnqula ngoMoya nangenyaniso.
Yohane 4: 24
Bonke ubomi buphuma kumoya kaThixo. Unika mntu ngamnye umoya, yaye xa umoya uphumile, siyafa. Xa sahluliwe kuThixo ngenxa yesono, umoya wethu uyabandezeleka kuba ufuna uThixo.
Xa siguquka kwaye sikholwe kuYesu, UMoya oyiNgcwele uqala ukuhlala ngaphakathi kwethu, sithelela umoya wethu. Ngoko ke, kungenxa yehlabathi lomoya ukuba sifumane umanyano noThixo kunye nawo onke amanye amakholwa asehlabathini, abelana ngoMoya omnye!
Uthe ke uPetros kubo, Guqukani, nibhaptizwe nonke ngabanye egameni likaYesu Kristu uxolelo lwezono. kwaye niya kwamkela isipho soMoya oyiNgcwele.
Ezinye izinto zelizwe lomoya
Ngaphandle koThixo nabantu, kukho abanye abantu abasebenza kwihlabathi lomoya: Iingelosi kunye needemon. Iingelosi zizidalwa zomoya ezidalwe nguThixo ukuze zimdumise yaye zisincede ngokwemiyalelo yakhe. UMtyholi Yingelosi evukela uThixo, kunye nezinye iingelosi esizibiza ngokuba ziidemon.
Azingomoya ababusayo zonke na, zithunywe ukuba zilungiselele abo baza kuba ziindlalifa zosindiso?
Umtyholi sele eyazi ukuba woyisiwe nguThixo, kodwa uzama ukwenza umonakalo omkhulu kangangoko ngaphambi kokuba kufike umhla wesohlwayo sakhe sokugqibela. Kwilizwe lomoya, iingelosi needemon ziyalwa. Inkqubo ye- iidemon zizama ukuphembelela umoya wethu, usibhubhise kwaye usenze sibandezeleke, kodwa iingelosi zizama ukusinceda nokusikhusela.
Ngenxa yoko yibani nemihlali, nina mazulu, nani ninomnquba kuwo. Yeha, abo bawumiyo umhlaba nolwandle! ngokuba uhlile weza kuni uMtyholi, enomsindo omkhulu, esazi nje ukuba ixesha analo lincinane.
ISityhilelo 12: 12
Sonke sinokhetho: ube kwicala likaThixo okanye umtyholi. Kufuneka silwe neempembelelo ezimbi kwaye sizithobe kuMoya kaThixo. Lo mlo ubizwa ngokuba idabi lokomoya.
Mthobeleni ngoko uThixo. Mchaseni ke uMtyholi, wonibaleka.
Ihlabathi lemimoya libuchaphazela njani ubomi bethu?
Ihlabathi lemimoya linempembelelo eninzi kubomi bethu. Sisenokungayiqondi loo nto, kodwa okwenzekayo kwihlabathi lomoya kuchaphazela yonke into.
Okokuqala, i isigqibo sokukholelwa kuYesu sisenzo kwilizwe lemimoya. Umoya wethu ubuyiselwa kubudlelane noThixo. Kungamandla omoya wakhe athi uThixo asinike uvuko nobomi obungunaphakade.
Xa umoya wethu utshintshwa nguYesu, guqula ubomi bethu bonke. UMoya oyiNgcwele uqala ukutshintsha iingcinga, iminqweno, kunye nezenzo zethu. Umlo ochasene nemvelo yethu yesono uqala emoyeni. Umsebenzi owenzeka emoyeni wethu uphembelela yonke into.
Ke nditshoyo ukuthi: Hambani ngokoMoya, nize unganelisi inkanuko yenyama.
Ihlabathi lemimoya linokusichaphazela kakubi. Simele sikulumkele ukuzithoba kwiimpembelelo ezimbi. Ezinye iingxaki ezinzulu, ngaphandle kwengcaciso yomzimba okanye yengqondo, ziqala ngokuvumela impembelelo yokomoya engeyiyo kubomi bethu. Ukuze siphephe le mpembelelo, simele sichase sonke isono size sisoloko sifuna ukuthanda kukaThixo.
Yibani nobungcathu, phaphani; ngokuba ummangaleli wenu, uMtyholi, uhamba njengengonyama egqumayo, efuna ubani angamginyayo; mchaseni lowo, nizimasekile elukholweni, nisazi ukuba kwaezo ntlungu ziyenzeka kubo abazalwana benu abasehlabathini.
Eyesi-1 kaPetros 5: 8-9
Ihlabathi lomoya licala elibalulekileyo kubomi bethu, kodwa akufuneki siwahoye amanye amacala. Ilungu ngalinye libalulekile kwaye kufuneka sifumane ibhalansi ukuze singagxili kwicala elinye okanye silibale ngelinye. Ezomoya, ezengqondo nezomzimba zinxibelelene.
Kwalo Thixo woxolo ungcwalisa ngokupheleleyo; kwaye konke ubukho bakho, umoya, umphefumlo nomzimba, zigcinwe zingenakusoleka ekufikeni kweNkosi yethu uYesu Krestu.
Kube njalo! Siyathemba ukuba esi sikhokelo sifutshane siyakunceda uqonde ukuba linjani ihlabathi lemimoya ngokutsho kweBhayibhile. Ukuba ngoku ufuna ukwazi ukuba iYerusalem entsha iza kuba njani, qhubeka ukhangela Fumanisa kwi-intanethi.